Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » Ny nosy Bahamas dia nibolisatra ny fizarana mari-pankasitrahana momba ny dia tamin'ny taona 2020
Na eo aza ny taona tsy mbola nisy toy izany, ny Bahamas dia manohy mametraka ny toerany ho toy ny toerana fitetezam-paritany any Karaiba ary nahazo fankasitrahana ambony avy amin'ny fampisehoana loka, mpanjifa sy varotra mihaja. Miaraka amin'ny jeografia tsy manam-paharoa misy nosy lehibe 16 sy cays an-jatony, manintona ireo mpandeha maniry hiala sy hiditra amina fialan-tsasatra mitokana ireo nosy. Raha mijery ny 2020 ny firenena nosy, miaraka amina loka marobe avy amin'ny Travel + Leisure, Condé Nast Traveler ary Caribbean Journal eo ambany fehikibony, ny Bahamas dia tapa-kevitra ny hanana 2021 mamiratra kokoa aza.
"Faly izahay fa nahazo ny Bahamas tamina loka marobe, na dia teo aza ny taona sarotra natrehin'ny indostrian'ny fizahantany," hoy ny talen'ny ministeran'ny fizahantany jeneraly Joy Jibrilu. “Ireo mari-pankasitrahana ireo dia manamarina fa ny Bahamas dia mijanona ho ankafizin'ny mpizahatany, ary maniry ny mbola handray azy ireo indray amin'ny taona vaovao.”
Travel + fialam-boly Manome loka ireo Nosy Bahamianina amin'ny loka lehibe indrindra eran-tany - Ny Abacos, Harbor Island, The Exumas ary Eleuthera dia nekena tao Travel + fialam-boly Loka tsara indrindra eran-tany ao amin'ny Nosy 25 ambony any Karaiba, Bermuda, ary The Bahamas sokajy. Andros 'Kamalame Cay Resort dia nomena tamin'ny Hotely 100 be indrindra eran'izao tontolo izao ary Hotely fialan-tsasatra farany ambony 25 any Karaiba sokajy.
Ny Bahamas dia nahazo loka tamin'ny Condé Nast Traveler's Loka momba ny safidin'ny mpamaky 2020 - Hotely Bahamianina efatra no neken'ny Condé Nast Traveler's Loka ho an'ny safidin'ny mpamaky. Kamalame Cay, Rosewood Baha Mar, Grand Hyatt Baha Mar ary SLS Baha Mar dia tafiditra tao amin'ny Resorts 15 ambony any amin'ny Nosy Atlantika sokajy.
Gazety any Karaiba Ny fankalazana ny fizahan-tany any Karaiba dia manaiky an'i Bahamas amin'ny sokajy telo - In Gazety any Karaiba 7th Nahazo mari-pankasitrahana isan-taona ny Caribbean Travel Awards, The Bahamas Toerana manavao ny taona noho ny fahalalahany mitohy mandritra ny areti-mandringana ary mametraka fenitra ho an'ny fampiharana fidirana. Ankoatr'izay, nomena anarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Nassau Lynden Pindling Seranam-piaramanidina Karaiba amin'ny taona ary Graycliff dia nekena ho Trano fisakafoanana any Karaiba taona.
Nahazo loka 13 ny Bahamas Gazety Scuba Diving Loka ho an'ny mpamaky safidy - Ny Nosy The Bahamas dia nekena tamin'ity taona ity Gazety Scuba Diving Loka ho an'ny mpamaky, miaraka amin'ny fametrahana toerana manasongadina ireo sorona antsitrika be dia be manerana ny nosy sy cays 700. Ny firenena dia voafidy voalohany ho an'ny biby lehibe indrindra, napetraka ao amin'ny dimy voalohany ho an'ny tanjona tsara indrindra amin'ny ankapobeny, fitsidihana lava-bato tsara indrindra, snorkeling tsara indrindra ary ny sanda tsara indrindra ary ho an'ny folo voalohany ho an'ny antsitrika tsara indrindra, ny fitsorohana an-drindrina tsara indrindra, ny antsitrika farany tsara, ny sary tsara indrindra , Diving tsara indrindra, fiainana makro tsara indrindra ary fahasalamana tsara indrindra amin'ny fiainana an-dranomasina.
Miaraka amin'ny nosy sy cay maherin'ny 700 ary nosy itodiana tsy manam-paharoa 16, i Bahamas dia 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida no manome sidina mora mitsoaka izay mitondra ny mpandeha lavitra ny andavan'andro. Ny nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo an-dranomasina ary kilometatra an'arivony maro amin'ny rano mahavariana indrindra eto an-tany miandry ny fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Jereo ireo nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.
Amerikanina mbola mandehandeha fa mijanona akaikin'ny trano mandritra ny fialantsasatra